Gudaha Clowded Barnegat Inlet Hada Qayla Dheer ah - Ellicott Dredges Blog
Source: SandPaper, New Jersey
Maaddaama hopper-ka loo yaqaan 'Currituck' uu googo'o waxa dabiiciga ah ee keydka gelinaya Barnegat Inlet, New Jersey, USA, xeebta Loveladies ee Long Beach Township ayaa mar kale ah deeq-bixiye sannadkan.
Qeybta Injineerada Ciidanka Mareykanka ayaa dhameystiray 65-maalmood xagaagii. Waxay qaadday 100,000 oo mitir cubic oo ciid ah si ay u baneyso wadada maraakiibta ganacsiga iyo kuwa madadaalada, howl ay qabato sanadkiiba laba jeer. Qiyaastii labaatan kun dhudhun oo dhudhun ah oo ciid ah ayaa lagu soo daadiyay meel ka baxsan xeebta Loveladies Beach.
Natiijo ahaan, ayuu yiri Guddoomiyaha Magaalada Frank T. Pescatore, xeebaha halkaas ku yaal "waa kuwii ugu fiicnaa ee aan ku arko sannado."
Duufaanta Felix waxay ka tagtay alwaax waaweyn oo ciid ah meel aad ugu dhow xeebta “dadka qaar baa wacay oo na weydiiyay haddii aan sababo jira u dhiseyno buuro ciid ah.” Qodista ayaa sidoo kale caawisay, ayuu yiri Pescatore.
“Way caawisay xoogaa maxaa yeelay dalool weyn ayaa ka jira Guriga Ahraamta. Taasi waxay iila muuqataa inay si fiican u buuxsamayso, ”ayuu yiri Pescatore. "Macno malahan inaad ku daadiso meel kale, maxaa yeelay meesha aad u baahan tahay waa halka ay godadku ka jiraan." Pescatore wuxuu sii waday inuu ogaado in kalluumeysatada qaar aysan ku farxi karin milkiilayaasha guryaha. "Godkaasi wuxuu ahaa goob kalluumeysi oo wanaagsan"
Milkiilayaasha doomaha waaweyn ee ganacsiga, wax cabasho ah kama qabaan. John Larson, oo ah milkiile dekedda Viking Village oo sidoo kale leh doonyaha xafladda Miss Barnegat Light iyo doomo kalluumeysi oo ganacsi Kathy Ann, Karen L, Lori L, F. Nelson Blount, Grand Larson, iyo Lindsey L, ayaa ku calaamadeysnaa xaaladda galka “weyn.” Kathy Ann oo 90-foot scalloper ah ayaa soo jiidaya 12 fuudh oo biyo ah wuxuuna ubaahan yahay celcelis ahaan 16-cagood oo qoto dheer oo "Currituck" uu ku haysto marinka.
Doomahaas iyo dhagaxaas iyo sida ay dawladu noola dhaqantay, waa wax aad u fiican, ayuu yidhi. Soo galitaanku waa weyn yahay, sidaa darteed ganacsiga soo galaya iyo kan ka baxaya halkan waa weyn yahay. ” “Dhagaxa dhagaxa” waa naanaysta Larson ee $ 41 milyan oo cusub oo loo yaqaan 'South Jetty', oo la dhammaystiray 1991.
Qaar baa laga yaabaa inay su’aal ka bixiyaan sababta loogu baahan yahay $ 800,000 sanadkii qashin-galka dhammaanteed, oo leh meel cusub oo jetty ah. Laakiin dib-u-habeynta joogtada ah ee qorshaha ayaa ahaa qorshaha oo dhan, sida uu sheegay af-hayeenka ciidamada Mareykanka ee Afka Ingriiska Rich Chlan.
Wadarta guud ee 150,000 dhudhunka yarooyinka ah ee laga saaro sanadkiiba waxay la mid yihiin sidii intaan diyaaraduhu u dhismin laakin farqiga u dhexeeya ayaa ah inay hadda si qoto dheer uga sii baxayaan diyaaradda, ”ayuu yidhi.
Qulqulka ayaa loo heystaa inuu joogteeyo qoto dheer ugu yaraan cagaha 12, halka ka hor inta aan la dhisin jetty-ga cusub, gudaha la geliyay qoto dheer oo ah cagaha 10, sida laga soo xigtay Chlan.
Qodaalka, wadar ahaan afar bilood oo shaqo, ayaa loo qorsheeyay inuu sii socdo sanadkiiba. The 150 ft. (45.7m) dheer "Currituck" waxaa naqshadeeyay oo dhistay Ellicott of International ee Baltimore, MD dib 1974. Saddex iyo labaatan sano ka dib, wadiiqadu wali si kalsooni leh ayey u shaqeysaa.
"Qodaalka waligiis ayaa loo baahnaan doonaa," ayuu yiri Chlan, "maxaa yeelay haddii aadan sii wadin qodidda, ugu dambeyn dhammaantood waa la buuxin doonaa, waxaadna ugu laaban lahayd isla xaaladdaas xaaladaha aan aaminka ahayn."
Wargelinta Ka Soo Baxday Aragtida Qodista
Mar kasta oo "Currituck" Capt. Ed Evans uu yimaado magaalada, wuxuu helaa raasamaal si uu ugula soo baxo dredge-kiisa kala jaban. Laakiin kanaalka "wuxuu umuuqdaa mid sifiican usii xajinaya sanadkan," ayuu yiri.
Waxay u buuxinaysaa markale dhakhso badan. Laakiin, aniga ahaan, iima muuqato inay u xun tahay sidii hore. ”
Laakiin ugu yaraan sanadkaan, shoal joogto ah dhamaadka Waqooyiga Jetty uma muuqato inuu sameysmayo. Evans wuxuu tilmaamay shaxda dhawaaqa. “Tan iyo markii ay geliyeen Koonfurta Jetty, doomaha waawayn waxay awoodeen inay aadaan oo ay yimaadaan halka ugu dambeysa Waqooyiga Jetty. Jaantuskan hore ee muujinaya kabaha halkaas ku jiray, hadda ma sii jiro; dhamaadka Waqooyiga Jetty wuxuu ahaan doonaa mid furan. Kanaalka aan ka qodnayna wuu sii furnaanayaa si ka wanaagsan. ”
Waxyaabaha aan loo qaadin Loveladies Beach waxaa la dhigaa koonfurta koonfurta cusub ee South Jetty, halkaas oo, sida laga soo xigtay injineerada Corps, ay u sii jeeddo dhinaca koonfureed dhanka Barnegat Light iyo, ugu dambeyntiina, Loveladies Beach. "Haddii aad la hadasho dadka loo maleynayo inay ogaadaan, cammuudda guud ahaan sidan ayey u socotaa si kastaba ha noqotee… haddii aad gelisid (ciid la jeexjeexay) wax ka yar 15 fuudh oo biyo ah, waxay billaabi doontaa inay xeebta u soo degto," ayuu yiri Evans .
Qeybtii hore ee South Jetty, oo hadda qeyb ahaan la quustay, ayaa si tartiib tartiib ah loogu buuxinayaa ciid u dhexeysa isaga iyo Koonfurta cusub ee South Jetty.
"Waxa ay runtii naga rabeen inaan sameyno ayaa ah inaan isku dayno inaan halkaan uga soo dhawaano sida ugu dhow diyaaraddan duugga ah intii suurtagal ah oo aan dhammaan ciidda ka buuxino," ayuu yiri Evans. “Dad wata doonyaha yar yar ee jet-ka ah ayaa halkan soo galayay oo ma arkeen dhagaxyadaas. Waxa ay sameyneyso ayaa ah inay ka shaqeyneyso xeebta. ”
Waxaa laga daabacay SandPaper, New Jersey